नेपालमै भेटीए १ हजार ८ सय ७४ वर्ष पुगेको मानिस : त्यही पनि जिउँदै - E ALL NEPAL
नेपालमै भेटीए १ हजार ८ सय ७४ वर्ष पुगेको मानिस : त्यही पनि जिउँदै
उदयपुर । संसारमा मान्छेको उमेर हदै बढी भए कतिसम्म होला ? सय देखि २ सय वर्षसम्मका हुन सक्छन् । तर, हजार वर्षभन्दा पनि माथि उमेर भएको मान्छे हाम्रै नेपालमा फेला परेको सुन्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्ला ।
’एक हजार ८ सय ४५ वर्ष पुगेको ४÷८६०÷१२३५ नम्वर रहेको नागरिकता राउतको नाममा टोली प्रमुख सुरेन्द्र नाथ आर्यालयले नागरिकता २०४४ साल चैत्र २९ गते प्रमाणित गरेका छन । अहिले राउतको उमेर ७४ वर्ष पुगेको छ ।त्यसपछि २०७३ साल असार २० गते नागरिकाताको पहिलो प्रतिलिपी इलाका प्रशासन कार्यालय कटारीबाट लिएका छन । नागरिकताका अनुसार राउतले २०४४ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरबाट गाँउमा गएको टोलीबाट लिएका हुन् ।
उनको जन्म मिति वि.सं २००० साल हो तर, दुई÷दुई पटक नागरिकता बनाउँदा समेत जन्म मिति वि.सं २०० साल लेखिदिए । जन्मेको महिना र गतेसम्म उल्लेख गरिएको छैन । नागरिताको आधारमा ७४ वर्षे बृद्ध राउतको उमेर अहिले एक हजार ८ सय ७४ वर्ष भयो । जुन सरकारी कर्मचारीकै गल्ती हो । ‘नागरिताको फोटो देखाउँदै पत्रकार जीवनाथदाहालले भने, ‘सेवाग्रहीप्रति सरकारी निकायका कर्मचारी गम्भिर नबन्दा बृद्धाको उमेर दुई शताब्दी पुग्यो ।
’ यता २०७३ साल असार २० गते पहिलो प्रतिलिपी लिएका राउतको जन्म मिति समेत राम्ररी नहेरी प्रतिलिपी दिने इलाका प्रशासन कार्यालयका कटारी शाखा अधिकृत सुनिल पौडेल रहेका छन् । पौडेलले पनि कुनै त्रुटि नऔल्याइकन प्रमाणित गरेका हुन् । २०४४ सालमा गाँउमा गएको टोलीबाट विग्रेको नागरिकता २०७३ साल असार २० गते पहिलो प्रतिलिपी बनाउँदा पनि सच्चिएन ।
इलाका प्रशासन कार्यालय कटारीका प्रमुख शाखा अधिकृत सुनिल पौडेलले तत्काल सच्चाउने बताए । उनले भने– ‘०४४ सालमा टोलीले बनाएको नागरिता हराएपछि अभिलेख गाईघाट थियो । गाईघाटबाट प्mयाक्स मगाएर हतारमा काम गरेका थियांै । त्यो लेख्ने बहिनी हुनुथ्यो, निशा परियार । निशा परियारले समेत वि.सं २०० नै राखि दिनु भएछ । धेरै भीडभाड भएकाले मैले पनि हेरिन, सिधै प्रमाणित गरेर पठाइ दिए ।
अहिले मैले थाहा पाएँ । अव प्रशासन कार्यालय कटारी मार्फत ताप्ली गाँउपालिकामा पत्र लेखेर सम्बन्धित व्यक्तिको खोजी गरेर सच्याउँछौ । बृद्धको नागरिकतामा जन्म मिति नसच्चिनु कार्यालय प्रमुखको हैसियतले म दोषी हुँ । अव सच्चिने छ ।’ यता उदयपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रमान श्रेष्ठले बृद्धाको नागरिताको ढड्डा हेरेर मात्र बताउन सकिने बताए । ‘
गोजीभरि पैसा चाहनुहुन्छ भने यी ६ चीज घर ल्याउनुस् ! जानी राखौ
नेपालको शिर उच्च पार्दै बेलायती सेनामा लेफिटनेन्ट कर्णेल बन्न सफल टोल खाम्चा मगरलाई बधाई…